August 2021 - ALANZAYAR
1.9.2021 ကံထူးရှင်သူဌေးလောင်း 3D Live တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ပြီ…(အားလုံးပေါက်ကြပီး ကံကောင်းကြပါစေ..)
1.9.2021 ကံထူးရှင်သူဌေးလောင်း 3D Live တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ပြီ…(အားလုံးပေါက်ကြပီး ကံကောင်းကြပါစေ..) ထီပေါက် ချဲပေါက်ဂါထာတော် ၁။သီဝလီ စ မဟာနာမံ၊ သဗ္ဗလာဘံ ဘဝိဿတိ။ ထေရဿ အနုဘာဝေန၊ သဗ္ဗေ ဟောန္တု ပိယံ မမ။ ၂။သီဝလိ စ မဟာဝီရော ယေ ယေ ပဿန္တု […]
လက်ရှိချစ်သူနဲ့ ရေစက်ပါ၊ မပါ သိနိုင်တဲ့ အချက် (၄) ချက်
လက်ရှိချစ်သူနဲ့ ရေစက်ပါ၊ မပါ သိနိုင်တဲ့ အချက် (၄) ချက် ရေစက်သာပါလာရင် ကြံဖန်ပြီးဆုံရသလိုပဲ။ ရေစက်မပါရင် ကြံဖန်ပြီးလွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေး ကြားဖူးကြမှာပါ။ ၁။ ပထမဆုံးဆုံတဲ့အခါ ရင်းနှီးနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုး သူနဲ့ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အချိန်မှာ အရင်ထဲကတွေ့ခဲ့ဖူးသလို၊ တစ်နေရာမှာမြင်ဖူးခဲ့သလို စိတ်ထဲမှာရင်းနှီးနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးရလိုက်တာပါ။ မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင် ခဏလေးအတွင်းမှာ အနှစ်နှစ်အလလကခင်မင်ခဲ့ဖူးသလိုမျိုး သံယောဇဉ်တွယ်ပြီး […]
ပေါင်းဖက်ရန်အသင့်တော်ဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်နေ့နံများ ပေါင်းဖက်ရန်အသင့်တော်ဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်နေ့နံများမြန်မာတို့ရဲ့ ထုံတမ်းအစဉ်အလာမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လက်ထပ်ထိမ်းမြားတော့မယ်ဆိုရင် ဗေဒင်တွေမေးပြီးပြက္ခဒိန်တွေ ကြည့်ကာ နေ့ကောင်းရက်သာတွေ ရွေးချယ်ပြီးမှ ထိမ်းမြားလက်ထပ်လေ့ရှိပါတယ်ဒီလိုထုံးတမ်းစဉ်လာကရှေးအရင်အချိန်တည်းက လူကြီးမိဘတွေ ပြုလုပ်လာကြတဲ့ အစဉ်အလာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ အယူအဆတွေ သိပ်မရှိတော့ဘူးဆိုပေမယ့် ဈေးသုံးလည်းမလွယ်နဲ့၊ ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း လက်ထပ်တော့မယ့် ဇနီးမောင်နှံများအတွက် ရှေးအရင်တည်းက တွက်ချက်ထားတဲ့ […]
အချစ်စစ်၊ မစစ် ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ ၁- ကိုယ့်ချစ်သူကိုအမြဲတမ်းပေးဆပ်ချင်တာသူ့အတွက်ဆို အရာရာထောက်ပံ့ပေးချင်တဲ့စိတ်၊သူတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘာပဲပေးရပေးရ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီးချစ်တတ်တာကလည်းအချစ်စစ်တစ်မျိုးပါပဲတဲ့။ ကိုယ့်အပေါ်မှာရော အဲဒီလိုချစ်တတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးနဲ့ ဆုံခဲ့ဖူးပြီလား။ ၂- အမြဲတမ်းဂရုစိုက်တာကိုယ့်မှာဘာအကြောင်းကိစ္စရှိရှိ အသေးအဖွဲလေးကအစဂရုစိုက်တတ်တဲ့ချစ်သူမျိုး သင့်မှာရှိပါသလား။ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုပိုပြီးတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူကသင့်ကိုlတကယ်အချစ်စစ်နဲ့ချစ်လို့ပါ။ ၃- ကိုယ့်အတွက်ဆို မာနတွေခဝါချထားတတ်တာကိုယ့်အတွက်ဆိုရင် သူ့ရဲ့မာနတွေကို ခဝါချထားတတ်တဲချစ်သူမျိုးပါ။ သူ့ဘက်ကမှန်နေရင်တောင်မှကိုယ့်အတွက်ဆိုရင် သူ့မာနတွေကိုခဝါချပြီး တောင်းပန်တတ်တဲ့သူမျိုးပါ။စိတ်ကောက်၊ စိတ်ဆိုးကြတဲ့အခါ တိုင်း […]
တတိယအကြ်ိမ်မကြေပွဲ ဗစ်ဒက်အတွက်ညှာမှာမဟုတ်လိုကြုံးဝါးလိုက်တဲ့ အောင်လ…….
တတိယအကြ်ိမ်မကြေပွဲ ဗစ်ဒက်အတွက်ညှာမှာမဟုတ်လိုကြုံးဝါးလိုက်တဲ့ အောင်လ……. မစ်ဒယ်ဝတ်တန်းချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲကို ပြန်ထိုးသတ်ခွင့်ရဖို့ ဘရာဇီးနိုင်ငံသားကို အလှဲထိုးအနိုင်ယူပြီးအခုချိန်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကို ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး လေးကျင့်ရေးတွေဆင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ one championship ရဲ့ one battle bround ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းပွဲစဉ်မှာ ချန်ပီယံဟောင်းအောင်လအန်ဆန်းက ဘရာဇီးဖိုက်ကို ပထမအချီမှာဘဲ လက်သီးထိုးချက်ဖြင့် အနိုင်ယူသွားတာပါ။ အစောပိုင်းခါးပတ်စိန်ခေါ်ပွဲတွေမှာ ရူံးခဲ့တာကြောင့်အောင်လအန်ဆန်းအတွက် […]
“လီအန်တိုအတိုင်းနီး”ကိုအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက် အောင်လရဲ့ နောက်ပြိုင်ဘက်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဆိုတာ အောင်လပြောပြီ
“လီအန်တိုအတိုင်းနီး”ကိုအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက် အောင်လရဲ့ နောက်ပြိုင်ဘက်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဆိုတာ အောင်လပြောပြီ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာ့ စပါးအုံးကြီး အောင်လကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ အောင်လကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်က ဘရာဇီးနိုင်ငံသား လီအန်ဒရိုအတေးစ်ကို အနိုင်ယူပြီးချိန်မှာတော့ အောင်လကို တခြားဖိုက်တာတွေကလည်း သူတို့နဲ့ ထိုးသတ်ဖို့ စိန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လနဲ့ ဖိုက်တာတွေရဲ့ ထိုးသတ်မယ့်ရက်ကိုတော့ အတိအကျ […]
အရေးကြီးပါတယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါ အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်.. အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့နှင့် ၁၂ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အတွက် အင်္ကျီအဖြူ၊ လက်ပတ်အနီရောင် တို့ကို ဝတ်ဆင်ပြီး တော်လှန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘဲ အခုထဲက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ အပြည့်အစုံကို အောက်က ဗွီဒီယိုဖိုင်တွင် […]
လွတ်မြောက်နယ်မြေထဲမှာပဲရနိုင်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
လွတ်မြောက်နယ်မြေထဲမှာပဲရနိုင်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ မင်းမော်ကွန်း ချဉ်ပေါင်ခင်း ကလည်း အဆင်သင့်ဆိုေ တဟင်းရ ည်သောကေ် သာက်မျှစ် နဲ့ချဉ်ပေါငေ်ြ က်ာကြော်သိပ် မြိန်တဲ့ဟင်းတွေ။မှိုတွေ ကလည်း အခင်းလိုက် ဟင်းချက်စား မလား ဟင်းချိုသော က်မလားကန်စွန်းပါချိုးကြော်လို က်တော့ စားသောက်ဆိုင် ထိုင်ရသလို။ ဂွေးတောက် လားကြောင်လျာလား ခရမ်းကဆော့သီး […]
မြန်မာစပါးအုံးအောင်လကို ၃ချီနဲ့အနိုင်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာကြီးအိုကာမီ…. အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ယူရှင်အိုကာမိတို့ရဲ့ပွဲဟာ မကြာခင်ပေါ်ပေါက်လာမူရှိပါတယ် အောင်လနဲ့ပက်သတ်ပြီးအနီး စပ်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာမယ် ပွဲကောင်းတစ်ပွဲက အိုကာမိနဲ့ဆိုတာသိုင်းလောကသားတေရဲ့ ကြားလူပြောများနေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း ယင်းပွဲစဉ်ပက်သတ်ပြီးပွဲကြိုသုံးသပ်မူများအား ပရိသတ်ကြီးထံ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောင်လနှင့်အိုကာမိ MMAနှစ်ဦးရဲ့အရေသွေးပိုင်းတေက လက်တလောအခြေနေက အောင်လကြီးဘက်ကအပြတ်အသတ်သာနေပုံထောက်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းနတ်ကြီးလွန်းတဲ့ သိုင်းလောကနဲ့ပက်သတ်ပြီး ရက်တိပြတ်လည်းမပြောရဲပါဘူး။ တဖန်ဂျပန်ဖိုက်တာကြီးအိုကာမိဆိုတာကလည်းတစ်ချိန်က ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုက်ရက်ကော့လ်အရာဆိုတာကလည်းပွဲပေါင်း၅၀မှာ၃၅ပွဲတိတိနိုင်ရရှိထားသူပါ သူမှာကြောက်စရာလက်နက်ကတော့ဖြောင့်လက်သီးတွေပါ။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။crd […]
သူ့ကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ သူအားလုံးကို သူဘယ်သူလည်းသိအောင် ကြုံးဝါးပြလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်း
သူ့ကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ သူအားလုံးကို သူဘယ်သူလည်းသိအောင် ကြုံးဝါးပြလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်း အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ကြုံးဝါးသံ အောင်လအန်ဆန်ကတော့ လီအန်ဒရိုကို ပထမအချီမှာတင် အလဲထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ခုလိုဘဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ငါကဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်မနေဘူး။ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းထဲမှာ ငါကြောက်နေရတဲ့ ဖိုက်တာတစ်ယောက်မှမရှိဘုး ငါချန်ပီယံဖြစ်နေတုန်းက စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ဝယ်တာဝိတ်ချန်ပီယံ Abbasov , Yushin […]